प्रेमका चरणहरू - के तपाईं तिनीहरूलाई चिन्नुहुन्छ र तपाईंले ती सबै महसुस गर्नुभयो? | बेजिया
के तपाईंलाई थाहा छ प्रेमका सबै चरणहरू के हुन्? ठिक छ, हामी यसको बारेमा धेरै लामो कुरा गर्छौं किनकि तपाईं यसको सबै मुख्य चरणहरू निश्चित रूपमा जान्न चाहानुहुन्छ। किनकि हामी सबैजना उनीहरु मार्फत जाँदैछौं, त्यसैले अब के हुने भनेर पत्ता लगाउने समय भयो।
यो जहिले पनि भनिन्छ प्रेममा हुनु भनेको सब भन्दा राम्रो क्षण हो तर त्यो क्षण अरूलाई पछ्याउन सकिन्छ जो उसलाई पछ्याउँछन् र त्यसैले हामीले पनि उहाँलाई राम्ररी चिन्नु पर्छ। अरु के छ त, के तपाईंलाई थाहा छ तिनीहरू मध्ये कति जना लामो समय सम्म रहन सक्छ? शंका संग नछोड्नुहोस्!
1 प्रेमको चरणहरू: आकर्षण र मोह
2 डेटि of र सम्बन्धको सुरुवात
3 दम्पतीको निराशा
4 संकटमाथि विजय हासिल गर्नुहोस्
5 विकास र भविष्य
प्रेमको चरणहरू: आकर्षण र मोह
हो, कहिलेकाँही हामी तिनीहरूलाई दुईमा विभाजन गर्न सक्दछौं, तर केही व्यक्तिले यसलाई अत्यन्तै तीव्रताका साथ अनुभव गर्ने भएकोले त्यहाँ दुबैको एकै समयमा कुरा गरिरहनु शर्त जस्तो केही छैन। जब हामी एक व्यक्ति प्रति आकर्षित हुन्छौं, हामी केवल उनीहरूको बारेमा जान्न चाहन्छौं, तिनीहरूलाई हेर्नुहोस् र तिनीहरूसँग रहनुहोस्। अवश्य पनि, यो कुनै पनि सम्बन्धको सुरुवातको सबैभन्दा प्रभावशाली पलहरू मध्ये एक हो। त्यहाँ हामीले नयाँ भावनाहरू पत्ता लगाउन थाल्यौं जुन सुतेका थिए र हुनसक्छ हामी जान्दैनौ कि अवस्थित छ। जब मोह आउँछ, तिनीहरू अझ तीव्र पार्छन्। मुटुको दरको त्वरण साथै आनन्दको भावना र घबराहट पनि सबै समयमा उपस्थित हुनेछ। सबैभन्दा तीव्र भावनाहरू यस चरणमा छन्, साथ साथै विचारहरू जुन थोरै सक्रिय हुन्छन्।
यो यस अवस्था हो जहाँ हामी अन्य व्यक्तिलाई आदर्श बनाउन प्रयास गर्दछौंहामी गल्तीहरू कहिले देख्ने छैनौं किनकि उनीहरूले गर्ने वा भन्नुपर्ने सबै कुरा हामीलाई राम्रो लाग्दछ र हामी आफैं पनि राम्रो महसुस गर्नेछौं। त्यहाँ हामी महसुस गर्नेछौं कि त्यस व्यक्तिको साथ भविष्य सम्भव भन्दा बढी हुन सक्छ र असंख्य परिदृश्यहरू हाम्रो टाउको हुँदै जान्छन् जहाँ हामी उनीहरूको आनन्द लिनेछौं। तर यो सत्य हो कि यस बिन्दुमा हामीले ती सबै भावनाहरूको डाउनहिल पनि हुनेछ भनेर उल्लेख गर्नुपर्दछ, तर समयको साथ। यदि तपाईंलाई थाहा थिएन, प्रेममा खस्नु औसतमा and र months महिना बीच रहन्छ।
डेटि of र सम्बन्धको सुरुवात
भावनाहरूको एकै समयमा, हामी धेरै जसो भेटघाट र सामान्य सम्बन्धको साथ शुरू गर्दछौं। यहाँ अब तपाईं व्यक्तिको बढी महत्त्वपूर्ण विवरणहरू देख्न थाल्नुहुन्छ, उनीहरूको सामर्थ्य र कमजोरीहरू। यद्यपि यो अझै पूर्ण भावना हो जुन प्रेममा पसे पछि पनि जारी रहन्छ। प्रत्येक पार्टीले सुरुमा सोचे अनुसार यो कार्य गर्न सक्षम हुन निश्चित प्रयासहरू गर्नुपर्दछ। तर पक्कै पनि यो लामो मार्ग हो र सबै कंकडहरू थपिन्छन्।
प्रत्येक जोडी जोखिमपूर्ण समय, स and्कट र निराशाको बीचमा जान्छन्। किनभने अघिल्ला चरणहरू पछि, नयाँ वास्तविकता आउँदछ। आइडियलाइजेशनले यस पृष्ठलाई परिवर्तन गरिसकेको छ र हामी यसलाई के मनपर्दैनौं भनेर हामी अझ गहन रूपमा हेर्न थाल्छौं। तसर्थ, यो समय मा शर्त लगन को लागी वा हुन सक्छ, सेवानिवृत्त मा, यो देखिएको छ भने सम्बन्ध हाम्रो आशा को रूप मा काम गर्दैन।
संकटमाथि विजय हासिल गर्नुहोस्
यदि खराब समय पछि, तपाईं नयाँ बिहानको लागि खोज्दै हुनुहुन्छ भने, यसले तपाईंलाई जारी राख्न र सम्बन्धमा शर्त बनाउन चाहान्छ। यसैले तपाईं सधैं ती खराब क्षणहरू गाड्नु पर्छ, वास्तविक कारणमा निर्भर गर्दै, तिनीहरू फेरि सम्बन्धमा घुम्न सक्छन्। यदि तपाईं सफल हुनुभयो भने, तपाईंको सम्बन्ध एक धेरै बलियो स्तम्भ हुनेछ, त्यसैले यो समस्या बिना अगाडि बढ्नेछ, निश्चित रूपमा।
विकास र भविष्य
जब हामी उनीहरूसँग धेरै बर्षसम्म बसिरहेका जोडीहरूलाई सोध्छौं, यसको रहस्य के हो भने, तिनीहरूले प्राय: प्रेम, सम्मान र विश्वासलाई जवाफ दिन्छन्। किनभने सम्बन्धहरू विकसित भएको छ र त्यस्तै, भावनाहरू पनि। तर यदि त्यहाँ सिद्धान्तहरूको राम्रो आधार छ भने, तब हामीसँग प्रशस्त भूमि हुनेछ। दुई व्यक्तिको बीचको फर्म जडान र भविष्यका योजनाहरू आइपुग्छन्। नयाँ कठिनाइहरू आउनेछन्, तर चाल भनेको केही भिन्नताहरूको साथसाथै अगाडि बढ्न सक्षम हुनुपर्दछ, तर सधैं प्रेम in को चरणमा उदाउँन एक अर्कालाई बुझ्ने र सम्मान गर्ने प्रयास गर्दै।
लेखको पूर्ण मार्ग: बेजिया » मनोविज्ञान र जोडी » भावनाहरु » के तपाईंलाई प्रेमको अवस्था थाहा छ?
हामी अक्सर गर्ने मेकअप गल्तीहरू कसरी समाधान गर्ने
अखरोट र किशमिश संग एप्पल केक